Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Memory Card
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Memory Card
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Memory Card
Waxaan soo kaban karto, Photos tirtiraa Memory Card ah?
Waxaan si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah sawirada kaadhka xusuusta (taas oo ah kaarka SD a) aan Sony camera digital. Waxaan u maleeyay in ay mar hore lagu wareejiyo aan computer, laakiin iyagoo aan weligood ahaanin. Ma jiraa barnaamij dib u soo ceshano kara sawirada kuwa? Mahad badan.
Sida caadiga ah, sawirro in kaadhka xusuusta aanay si buuxda u saaray. Waxaa kaliya lagu calaamadeeyay sida geli karin ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Haddii aad rabto in aad iyaga u soo ceshano, aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka kaadhka xusuusta iyo hubi in kaarka waxaa laga garan karaa your computer. Markaas waxaad ka raadin kartaa software kabashada sawir si ay kuu caawiyaan.
Halkan waxaan aad ugu boorinayna Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac aad u. Barnaamijkan waxa awood galabsaday sawiro laga badiyay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, kaarka kharribeen, nidaamka shil ama sababo kale. Waa barnaamij aad u faa'iido badan inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka kaadhka xusuusta sida SD, kaarka SD Micro, kaarka CF, kaarka MMC. Waxaad u isticmaali kartaa dib u soo ceshano photos tirtiray labada camera digital iyo telefoonka gacanta.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery hadda.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Memory Card
Halkan waxaan ku soo ceshano xasuusta photos kaarka la Wondershare Photo Recovery for Windows. Users Mac soo kaban karto sawiro in talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Tallaabada 1 Run Wondershare Photo Recovery on your computer oo waxaad arki doontaa daaqad oo muujinaya qalab ay taageerayaan oo dhan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku xidhmaan kaadhka xusuusta aad la your computer ka dibna riix "Start" si ay u bilaabaan.
Fiiro Gaar ah: Waxa aad u muhiim ah in aad joojiso isticmaalka kaadhka xusuusta aad tan iyo sawiro aad ka lumay, sababta oo ah data cusub oo lahaa suurto gal overwrites sawiro aad rabto in la soo celiyo.
Tallaabada 2 Sida aynu wada ognahay, qalab lagu kaydiyo xiran computer sidoo kale la tusay doonaa sida drive adag. In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan drive adag ee kaadhka xusuusta iyo guji "Scan" si ay u eegaan sawirada tirtiray.
Tallaabada 3 In dhamaadka, waxaad ku eegaan kartaa sawiro laga helay natiijada iskaanka. Markaas waxaad dooran kartaa kuwa sawiro aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer. Ma Fadlan iyaga ku badbaadin dib ugu kaadhka xusuusta aad, ama dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.
Fiiro gaar ah: Si aad u qabtaan soo kabashada, waxaad u baahan tahay inaad iibsato code liisanka ee Wondershare Photo Recovery ah. Version maxkamad Tani waa si aad u iskaan kaadhka xusuusta iyo Falanqeynta sawiro laga helo si ay u hubiso in ay yihiin waxa aad doonaysid in aad ka soo kabsado ama aan.
Hababka in dayactir Data Loss keena Error Memory Card
Sidee loo nadiifiyaa joogto ah Card Memory la Card Shredder
Sidee inuu ka soo kabsado xogta iyo dayactirka card SD micro burburay
siyaabo inuu ka soo kabsado xogta ka kaarka xasuusta kharribeen
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta qalab kabashada card Memory online